Ma La Oran karaa Wasaaradda Maaliyadda Puntland Kaalinteedii Waa ay Ka Soo Baxday? – Radio Daljir
Ma La Oran karaa Wasaaradda Maaliyadda Puntland Kaalinteedii Waa ay Ka Soo Baxday?
Janaayo 13, 2010 12:00 b 0
Garowe, Jan 13 – Maamulkii hore ee madaxweyne Cadde Muuse runtii wax baddan oo ay qabteen wuu jiray, haddana waxaa ugu weynaa oo ay ku fashilantay waxaa uu ahaa maareynta ay sida xun u maareeyeen dhaqaalihii Puntland, oo waliba wasaaraddii maaliyadda ay doorkeedii qaadan weyday, taasoo keentay in uu fariisan waayo dhaqaalihii puntland sida dollarkii sarifkiisa oo marna cirka galayey marna aad hoos ugu dhacayey, lacago faalso ah oo fara baddan oo leyska soodaabacday, maamulka oo kontorooli waayey mashiinadii ay dadka iska soo qaateen, shaqaalihii iyo ciidamadii oo mushaharaad loo waayay, dhaqaalaha oo galayey jeebab qaldan, kuwaasoo ku dhisnaa nidaamka fadlanta ah iyo qaar kaloo baddan.
Haddaba markii uu soo galay tartanka madaxtinimo madaxweyne Faroole waxaa ololeyntiisa ugu weyna in uu yir waxaan gacan adag ku qabanayaa oo wax weyn ka badalayaa nidaamka maaliyadeed ee Puntland. Isla markii la doortayba waxaa uu sheegay in uu wasaaradda maaliyadda oo ah halbowlaha ugu weyn hay?adaha Puntland in uu u dhiibi doono shaqsi aqoon iyo qibrad weyn u leh maareynta maaliyadda. Dad baddan ayaa isweydiinayey halka uu madaxweynuhu ka keenayo shaqsigaa, Kadib markuu magacaabay ayaa haddana waxaa soo noqotay arinta ah shaqsigan oo ahaa qurbojooge oo aanan siyaasadda horey looga aqoon iyo qaabka uu ka filayo madaxweyne faroole in uu u maareeyo dhaqaalaha Puntland.
Riyadii madaxweyne Faroole waa ay dhabowday oo markiiba wasiirka cusub waxaa uu ku guuleystay in uu aqoontiisa iyo qibradiisa la kaashado caqabadihii hor taagnaa dhaqaalihii Puntland. Waxaa uu markiiba la dagaalay musuqmaasuqii iyo lacagihii sida qaldan loo qaadan jiray oo ugu dhici jirtay jeebabka qaldan, waxaa uu fadhiisiyay sarifkii lacagaha qalaad oo illaa iyo maalintay qabteen illa iyo hadda uu fadhiyo uusan isbadal weyn ku dhicin, nidaamkii wax walbaa gacanta lagu qori jiray oo ay u badaleen nidaam kombiyuutareysid ah, mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada oo si joogto ah loo qaato, iyo dakhligii dowladda oo aad u kordhay.
Waxaa iyagana wax weyn laga qabtay oon meesha aan laga saari Karin waxbarashada oo runtii uu wasiirka waxbarashada muujiyay karti iyo aqoon iyo uu heelanaan in uu wax weyn ka badalo nidaamka waxbarasho ee Puntland.
Inkastoo caqabado kaloo fara baddan ay jiraan sida amnigii oo ay kooxo danaystayaal ahi ay qalqal galinayaan, abaaro baahsan iyo mas?uuliyiintii dowladda oo lala beegsanayo dilal, haddana waxaan oran karnaa Puntland isbadal weyn ayaa laga dareemayaa.
Haddaba waxaan rabaa in aan qoraalkeyga kusoo afjaro labo arimood oon midna aan kula hadlayo maamulka midna shicibka.
* Tan maamulka:-
Inkastoo aad wax weyn oo isbadal ah aad sameyseen haddana ogaada Puntland wey dayacan tahay weli oo waxa ay u baahan tahay Vison dheer oo mustaqbalka loo horseedo, tusaale ahaan maamulka maxaa u qorsheysan shan sano dabadeed, side ayeey doonayaan in ay puntland u ekaato shan sano Kadib. Runtii haddaan vision noocaas ah la sameyn macno yeelan meyso wax leyskaga qabto by chance, waa in mar walbaa qorshe lasii degsadaa. Waxaan kaloo maamulka kula talinayaa in deegaanada uusan weli tegin uu isku dayo inuu tago oo wax ka qabto sida Sool, Sanaag, Ceyn, Heyland, Bariga Fog iyo magaalooyinka kale oo dhan. Wey jirtaa in ay dhib weyn idinku heyso qalalaasaha amni daro haddan sidii uu horey u yiri allaha u naxariistee madaxweyne Cabdirishiid Cali Sharmaarke gacanna Qorigga gacanna Doorashada. Hadda Faroole waxaan kaa rabnaa gacanna Qoriga gacanna horumarka Puntland.
* Midda shacabka:-
waxaan leeyahay armay danteena ku jirtaa in wanaaga lagala shaqeeyo maamulka oo aynu iska soo qabano kuwa nagu hayo qalqalka io amni darrada. War ha eegina shaqsi ee eega danta guud ee Puntland. Puntland oo hormartaa waxaa ay dan ugu jirtaa idinka iyo ubadkiina. Guud ahaan Soomaaliya waxaa allaah ka baryayaa in uu ku soo dabaalo amni iyo nabad waarta oo uu Allaah danta Soomaali weyn garadsiiyo.
Qoraalkeygii waa iga inta waxaan leeyahay Allaah ayaa iska leh mahaddaas oo idil kadibn waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne Faroole iyo wasiiradiisa gaar ahaan Faarax Cali Shire iyo Juxaa
Beledweyn oo badi u gacan gashay is-bahaysiga Ahlu Sunna & dawlada federaalka ah.
Maamulka Faroole Sannad Ka dib – Qore Khadiijo Maxamed Cali.